Action Bank | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE! Action Bank | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE!
Barcrest ee Action Bank Afyare waa dawayn dhamaystiran kuwa, kuwaas oo doonaya sawiro tayo leh sifooyinka bonus cajiib ah in 5 a×3 ciyaarta booska ku ambadeen wax la 20 betlines. Action Bank Afyare waa hodon ku theme jir-dugsiga Retro iyo cajiib ah calaamadaha ay. Waxaad arki kartaa wareegga bangi loo isticmaalaa in la tixraacayo. Waa wareegga aad u baahan tahay si ay u jebiyaan inay ku guuleysato Ghanna ku ahee. Ma aha in xiiso leh?
Graphics iyo calaamadaha:
All credit ee samaynta Action Bank sidaa darteed ka mid ah video caan Afyare ciyaartoyda ay leeyihiin naqshadeynta ee ciyaarta this. Waxaad shiidaa dib ugu wakhtiga oo arag jir mashiinka ah booska qabanqaabiyey. Barcrest isku dayeen in ay milmaan jir style theme la qaababka casriga video Afyare si ay u abuuraan kulan booska kaamil ah, iyo waxa ay ku guulaysteen. The calaamadaha ugu muhiimsan ee kulankaan waa iskutallaabtiisana, noughts, cas weyn 7, BAR, Joker iyo imkaaniyaadka Golden ah. turub The ciyaaraa sida duurjoogta ah iyo Golden yiri- waa calaamad ku kala firdhi ah.
Sida ciyaarta wax booska kale calaamad u kala firdhiso waa doonayso aad u baahan tahay si ay u qori waayo,, haddii aad rabto si ay u helaan dhigeeysa free. By habka, muteystay dhigeeysa oo lacag la'aan ah Action Bank Casino boosaska is quite different from other mobile slots. First aad leedahay inay shan fidiyana meel kasta oo giringirihii daadgureyntaasi ka dibna ciyaarta ku weydiinayaa inaad furtid wax wareegga dahabka. Waxaad ka heli tirada free dhigeeysa waxaad kasbateen, by furitaanka wareegga.
cas weyn 7 waana astaanta ugu sarreeya lagu qiimeeyo ee ciyaarta this. Caga saddex ama in ka badan 7s waxay kaa caawin kartaa in ku guuleystay abaalmarinta aad u weyn in kulankaan. Waxaad ka abuuri karaan fursado badan abaal by 7s degtey iyo wilds. Sidoo kale, aad ku guuleysan abaal-marinno dheeraad ah marka aad dalka qiimaha sare bixinta oo ay la socdaan calaamado wilds ah.
Waxaa la yaab leh in kulankaan idiin. Waxaad u malayn kartaa in noughts yihiin calaamadaha aan waxtar lahayn, laakiin waxa ay noqon kartaa booska dahab ah iyo inaad u bixisaa abaalmarinno ka badan inta aad filayso ka dib wareejin kasta.
Big Bank Round The:
Playing Big Bank Round in Action Bank Waxaa suurto gal ah haddii aad heli 25 dhigeeysa free. Waxaa ku wareegsan soo gaaray oo aad u baahan tahay inaad soo qaado saddex calaamado la mid ah oo ciyaarta aad abaal leh 500x of total cirib lacagta.
Iyadoo RTP ah 95.16%, kulankaan waa mid ka mid in la sugaynaa in. The bonus bangiga weyn waa highlight muhiimka ah ee ciyaarta oo waa ka tagay wanaagsan ka qaababka caadiga ah. Iyadoo bet ugu yar yar intii 20p ciyaartoyda aan haysan wax badan in ay lumiyaan. A waa in ay isku dayaan ee mawduuca oo dhan ku caashaqay classic!
Burburi da Bank
Bar Bar Black Idaha 5 Reel
Xoqin Cards Online | BILAASH 100% 2nd Deposit Match…